Book New chafuko — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Kule ncwadi enamandla, Trip Lee zikhalazela lixesha lokuba sivuke aze avuke, ukuba baphile ngendlela sadalwa ukuba baphile. Young okanye omdala, siye andibizwanga ukuba ubomi kuye. Ngoku. amakholwa Young sijongene neengxaki ezifanayo njengamaKristu abadala, kodwa bavakalelwa ngeendlela ezizodwa. UKUVUKA ejongene ezo ngxaki engundoqo ilula, enzulu, kunye nendlela yokuphila-tshintsha.
Musa bazakuhlala apho: SUKUMANI!
Burton • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 6:29 pm • impendulo
david • EtiMnga 25, 2014 ngexesha 3:25 pm • impendulo